यी इरानी महिला, जो ३५० किलोको बाइकबाट घुमिरहेकी छिन् ४५ देश – Medianp
यी इरानी महिला, जो ३५० किलोको बाइकबाट घुमिरहेकी छिन् ४५ देश
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, मङि्सर ११, २०७४१०:४८
इरानकी मार्ल एजार्लो नाम गरेकी महिला एक मिशनमा छिन् । उनी ८०० सिसीको बाइक बिएमडव्ल्यू जिएस बाट ७ महादेशको यात्रा गर्न चाहिन्छन् । उनको मिशनमा ४५ देश पर्छन् । उनी आफ्नो बाइकबाट इरान पनि जान चहान्छिन्, तर इरानमा महिलालाई बाइक चलाउने अनुमति छैन ।
३५ बर्षिया उनी जुन बाइक चलाउछिन्, जसको तौल ३७० किलो हुन्छ । मानिसहरु धेरै तौलको बाइक महिलाले चलाएको देखेर छक्क पर्ने गरेका छन् । उनले बाइकमा पुतली र खेलौना राखेकी छन् । महिलाहरु उनलाई देखेर खुसी हुन्छन् र अंगालो मार्छन ।
उनले ६ बर्ष देखि बाइक चलाइरहेकी छन् । उनी १५ बर्ष अघि भारतको पुणे आएकी थिइन् । १ लाख किलोमिटर बाइक गुडाएर नयाँ किर्तिमान बनाउने उनको योजना छ । यो मिशनमा उनीसँग राइडर पंकज त्रिवेदी समेत छन् । उनले यो मिशन १५ मार्च देखि सुरु गरेकी थिइन् । उनीले आफ्नो यात्राको पहिलो चरण पुरा गरिसकेकी छिन् ।
उनले म्यानमार, थाइल्याण्ड र अस्ट्रेलियाको यात्रा सुरु गरिसकेकी छन् । अहिले उनी पेरुसम्मको आफ्नो यात्रको दोस्रो चरण पुरा गर्ने अभियानमा छिन् । उनले मार्केटिङमा एमबीए र पिएचडी गरिसकेकी छन् । एजेन्सी
दलाई लामाविरुद्ध खनिए धिरज राई, नेपालीको अपमान गर्नेविरुद्ध अब अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने बेला आएको छ (भिडियो)
भारतसँगको विवाद क्षेत्र नियन्त्रण गर्न चीनले बनायो तीव्र गतिको आधुनिक मेसिन
नयाँ वैज्ञानिकको नयाँ आविष्कार ! जुन देख्नु भयो भने हाँसो रोक्न सक्नुहुनेछैन !
कुकुरको मृत्यु हुँदा गरियो विधिवत् रुपमा अन्त्येष्टि, पूरा गाउँ नै शोकाकूल !
यस्तो छ तेस्रो र समलिङगी बच्चा जन्मनुको कारण